I-Funny T Shirts iphrinta yokudayiswa China Manufacturer
Incazelo:Funny T Shirts Printer,I-Shirts Printer enziwe ngokwezifiso,Yakha i-Shirt Yakho
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-Funny T Shirts iphrinta yokudayiswa
I-Model No.: RF-A3 T1807131
Sifuna ukuthengiswa kwebhizinisi elihlala isikhathi eside, sinethemba lokuthi nonke nizovakashela umkhiqizo wethu. Singumshini omkhulu wephrinta, siyakwamukela sonke ukuvakashela ifoni yethu. Kukhona onjiniyela abaningi e-factory yethu, nezinguqulo eziningi zephrinta yokuthengisa. Awudingi ukukhathazeka mayelana nenkonzo yekhwalithi nangemva kokudayiswa. Le phrinta ye-Funny T Shirts ekuthengiseni isebenzisa ubuchwephesha bokuqala be-inkjet, finyelela ukunyathelisa okuphezulu okucacile. Kulula kakhulu ukusebenza futhi usayizi omncane, kulula ukuthwala. I- Funny T Shirts Printer ithatha ubuchwepheshe be-MicroPiezo digital, engakwazi ukuklama i-Shirt Your Own Shirt.
Uma kuqhathaniswa nezobuchwepheshe bendabuko, i-RFC digitalbedbed Shirts Shirts Printer ikusize ukuthi ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa nokushisa izinqubo eziningi zendabuko, okwenza ukuthi kunciphise umbala wenkinobho yendabuko, lo mkhakha uthola ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zomsebenzi, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephakeme ephelele izuzwe ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
Funny T Shirts Printer I-Shirts Printer enziwe ngokwezifiso Yakha i-Shirt Yakho I-T Shirt Printer T shirt Printer T shirt printer I-A4 Size T Shirt Printer I-UV T-shirt Printer